Iharan’ny Tsy Fahazoana Aterineto i Benin Nefa Andro Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Valaketraka fa tsy tezitra tamin'ilay fahatapahana ireo mpikatroka
Voadika ny 21 Mey 2019 11:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Swahili, Shqip, Français, Ελληνικά, English
Vao maraina be izy ireo sy ireo vovonana Web maro hafa matanjaka, anisan'izany ny Twitter, Instagram, Telegram sy ny Viber, dia samy latsaka tao anaty haizina avokoa. Tamin'ny 11 ora, ny 99,5%-n'ireo fahazoana Aterineto no nanjary tsy azo nidirana intsony, nampiditra ilay firenena Afrikana Tandrefana ho tao anatin'ny fampijanonana Aterineto teo amin'ny sehatra nasionaly izay naharitra hatramin'ny alina.
Ireo lalàna vaovao momba ny fifidianana, napetraky ny fitantanana amperinasa tarihan'ny Filohampirenena Patrice Talon no nanodina ny politika tao Bénin, izay nifaninanan'antoko politika marobe hatramin'ity taona ity. Saingy miaraka amin'ireo politika vaovao izay manondrotra ny tahan'ny fandraisana anjaran'ireo antoko amin'ireo fifidianana, antoko politika roa monja no nahatafita kandidà tamin'ireo fifidianana solombavambahoaka. Mifamatotra akaiky amin'ny filoham-pirenena ireo antoko roa ireo.
Tao anatin'ny fotoana nialoha ny fifidianana, naparitak'ireo mpitandro ny filaminam-bahoaka, izay nampiasa entona mahasempotra sy kibay. mba hanaparitahana an'ireo fihetsiketsehana ireo andiana fihetsiketseham-bahoaka – izay nitranga tao an-toerana na teo aza ny fandraràna amin'ny ankapobeny tsy hanao hetsika an-dalambe. Notaterin'ny Amnesty International fa marobe ireo mpitarika ny mpanohitra no nosamborina nandritra ireo fihetsiketsehana.
Samy niampanga an'ity fanakatonana ity avokoa tao anatin'ny fanambaràna iray niraisana ireo mpikatroky ny tranonkala misokatra tao amin'ny Media Foundation ho an'i Afrika Andrefana, ny Internet Sans Frontieres, CIPESA, Access Now, Global Voices (Afrika atsimon'i Sahara) ary ireo vondrona hafa:
Ny komity misahana ny zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana, mpandikateny ofisialin'ny Fifanarahana Iraisam-pirenena mikasika ny Zo Sivily sy Politika, dia manipika ao anatin'ny Fanehoankevitra Ankapobeny faha-34 fa tsy maintsy ilaina ary mifandanja ireo fameperana ny adihevitra anaty tambajotra mba hanatrarana ny tanjona ara-drariny.  Ireo fampiatona, etsy andaniny, dia miteraka vokatra tsy mifandanja ho an'ireo mpampiasa rehetra ary mametra tsy misy dikany ny fahazoana vaovao sy ireo serasera amin'ny asa maika ao anatin'ireo fotoana tokony handraisana fanapahankevitra. Sady tsy ilaina no tsy mahomby ho entina manatratra tanjona ara-drariny ireo fampiatoana ireo, satria matetika dia mamafy fisavoritahana foana izy io sady mamporisika kokoa an'ireo olona hanao hetsi-bahoaka.
13 ora izayAngola